घरपरिवारमा देखिने बाल व्यवहार – Shasankhabar
डा. सावित्री शर्मा । हिजोआज साना–साना बालबालिका मोबाइल नभई खाना नखाने, गृहकार्य नगर्ने र परिआए रातभरि मोबाइलमा भिडियो हेरेर बस्ने गर्दछन् । अहिलेको समयमा बाबुआमाका लागि यो ठूलो समस्याको रुपमा उजागर भएको छ । मूलतः बच्चाहरुको पहिलो विद्यालय घर हो र गुरू पनि बाबुआमा । प्रविधिले छोपेको अहिलेको समयमा बच्चादेखि वृद्धवृद्धा सबैलाई मोबाइलजस्ता प्रविधिले दास बनाएको छ ।
स्मार्ट फोनको दुनियाँमा आफ्नै घरका सदस्यबीच कुराकानी हुन छोडिसकेको छ । अभिभावक बच्चाहरुलाई भुलाउन वा आफ्नो काम गर्न उनीहरुलाई मोबाइल दिने गर्दछन् । यस्तो गर्दा बच्चालाई पनि सजिलो र अभिभावकलाई त झनै गज्जब र सजिलो हुन्छ । आपूm पनि सामाजिक सञ्जालमा एकैछिन भए पनि रम्न पाइयो । तर, त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा आपूm व्यस्त हुँदा आफ्नो परिवारको अभिन्न अंग सदस्य भएको सायद् कसैलाई हेक्का रहला विशेषगरी, छ वर्षमुनिका बालबालिकालाई भौतिक यन्त्रको दास बनाउँदा उनीहरुमा शारीरिक र मानसिक दुवै प्रकारले असर पु¥याउँदछ । घरमा अभिभावकहरुले यस्ता कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
बच्चाको दिमाग विकास भइसकेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नकारात्मक कुनै पनि टिप्पणी गर्नुहुँदैन । हामी बच्चालाई ‘नगर नगर’ भन्छौँ, त्यसले पनि उनीहरुमा नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । बच्चाहरुमा सकारात्मक कुरातर्फ बढी ध्यान दिने बानी बसाल्नु पनि अभिभावकको नै दायित्व हुन आउँछ । अर्का मनोविज्ञ डा। कँडेल भन्नुहुन्छ, “बच्चाहरु स्कुलबाट आएर गृहकार्य गर्न नखोज्ने र बिहान भात नखाएर भए पनि गृहकार्य गर्ने गर्दछन् । यस्तो उनीहरु विद्यालयको डरले गर्ने गर्दछन् । गृहकार्यको पेलानले नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मका करिब ६५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु पढाइबाट टाढा जान खोज्दछन् ।” त्यसैले, बच्चाले गृहकार्य गर्न चाहेन भने पनि त्यसमा अभिभावक र शिक्षकले कुनै यातना दिनुहुँदैन । बच्चाले जसरी सजिलो तरिकाले बुझ्दछ, त्यसरी नै गृहकार्य गर्न दिनुपर्दछ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेको अंकभन्दा उसले हासिल गरेको ज्ञान मह¤वपूर्ण हुने डा. मनोविद् बताउनुहुन्छ ।
एक अभिभावकले सोचे– “मेरो बच्चाले पढाइमा ध्यान दिँदैन, हवाईजहाज बनाउँछु भन्छ र त्यसैमा बढी ध्यान दिन्छ ।” यसको जवाफ दिँदै डा। कँडेल भन्नुहुन्छ, “बच्चालाई वैज्ञानिक बन्न दिनुहोस्, यसले उसमा सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ र पढाइतिर पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्नुहोस् ।” अर्का अभिभावक प्रश्न गर्नुहुन्छ, “मेरो बचचाले किताब–कापी च्यातेर खान्छ ।” यसको जवाफमा डा. भन्नुहुन्छ, “बच्चाको पेटमा खनिज पदार्थको कमी भएमा उसले किताब–कापी च्यातेर चपाउन खोज्छ । त्यसैले, यथाशीघ्र चिकित्सकलाई देखाउनुहोस् ।” यस्ता कुराहरुको पालना गरेमा मात्रै बच्चा मनोवैज्ञानिक हिसाबले स्वस्थ हुने उनको भनाइ थियो ।
विभिन्न सिफ्ट मिलाएर विद्यालयका कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुका अभिभावकलाई उक्त शिक्षा प्रदान गरिएमा मात्रै बच्चा वा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले स्वस्थ राख्न सकिन्छ । हिजोआज बालबालिकाको स्वास्थ्य र आत्ममनोबल बढाउनका लागि अभिभावक वर्गमा चेतना आउन आवश्यक देखिएको छ । मोबाइल चलाउनदेखि लिएर विद्यालयको गृहकार्य गर्न नमान्नुमा घरमा आमाबाबुको गलत क्रियाकलाप आदिको कारणले हुन सक्दछ । यसले बालबालिकामा नकारात्मक सोच पैदा गराउने हुनाले अभिभावक वर्ग बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ । चितवन पोष्टबाट